भगवान नै हुन्, डाक्टर- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
भगवान नै हुन्, डाक्टर
‘अनि उनले संसार देखे’, सल्यान दमाचौरका नरहरिको कथा पढ्दा मानिसको जीवन अनन्त शृंखलाहरूको जोड हो भन्ने पुष्टि हुन्छ  । उनको दृढ विश्वास, गौशालास्थित धर्मशालाका क्यान्टिन सञ्चालक मुकुलकुमार सिन्हाको सहयोग, तिलगंगा आँखा अस्पताल र डा. सन्दुक रुइतको प्रयासले एउटा मानिसको जीवनमा आएको परिवर्तनको कथा पढ्ने धेरैको आँखा रसाउन सक्छ  ।
नरहरिकै शब्दमा उनका लागि संसारमा भएका दुई चिज भगवान र डाक्टर रुइत उस्तै हुन् भन्ने अभिव्यक्ति डा. रुइतले देश/विदेशमा पुर्‍याएको सेवाप्रतिको सही मूल्यांकनसँग मेल खाने विषय हो ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँवानेश्वर, काठमाडौं प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ १२:१७
जमिन र सुनको मूल्य यतिखेर नेपाली बजारमा खरिद गरिनसक्नु भएको छ  । यद्यपि खरिद घटेको छैन  ।
नेपाली समाजमा यी दुई चिजलाई मान, सम्मान र प्रतिष्ठासँग जोडिएर हेरिन्छ । त्यसैले धन कमाउनासाथ जग्गा र सुन किनिहाल्छन् । गहाना बनाएर जीउभरि लाएर ठाँटिन्छन् । अग्लो र ठूलो घर बनाएर शानले बस्छन् ।
सुनलाई धातु मध्येको श्रेष्ठ मानिन्छ । र त सुनौलो रंग, सुनपानी, सुनमाया आदि भन्ने गर्छन् । धर्म, संस्कृतिसँग पनि सुन जोडिएर आउँछ ।
जमिन, जल र जंगल प्रकृतिले निःशुल्क दिएको हो । तर अहिले यी वस्तुको उपभोग मूल्य तिरेर गर्नुपर्छ । खेती गर्न, घर बनाउन र अन्य प्रयोजनका लागि जमिनको माग बढ्दो छ । धेरै जमिन किनेर आफूलाई धनाढ्य देखाउनेको संख्या पनि धेरै छन् । विगत दुई दशकपछि जमिनको मूल्य अचाक्ली बढेको छ ।
विदेशिएका युवाहरूले कमाएको पैसा लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र अर्को नहुँदा जग्गामा लगानी गरेकाले मूल्य बढ्दै गएको हो । अर्को कारण गाउँघरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर नहुँदा पैसा कमाएपछि सहर–बजारमा बसाइँ–सराइ गर्ने संख्या वर्षेनि बढ्दै गएकोले जग्गाको मूल्यवृद्धि भएको हो । संकट कालमा सुरक्षाको दृष्टिले सहरमा बसाइँ–सराइ बढेको हो । बैंकर र प्लटिङ व्यवसायीले गैर–उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गर्नाले पनि जग्गाको मूल्य अचाक्ली बढ्न गएको हो ।
अबको यो पहिलो पुस्ता गाउँमै रमाउँछन् । ती विदेश गए पनि गाउँमै फर्किन्छन् । दोस्रो पुस्ता सहर–बजारमा रमाउँछन् । ती गाउँ फर्कन्नन् । तेस्रो पुस्ता जो पढ्न र काम गर्न विदेश पुग्छन्, ती स्वदेश फर्किन चाहँदैनन् । त्यसैले १०/१५ वर्षमा सहर–बजारको घरजग्गाको मूल्यमा मन्दी आउनेछ ।
– फुर्पा तामाङ, रसुवा
प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ १२:१७